ဝ ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေလဲ ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၀ ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေလဲ ?
၀ ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေလဲ ?
- ဒေါက်တာ ကွာစိ
Posted by ဒေါက်တာ ကွာစိ on Feb 24, 2013 in Copy/Paste | 42 comments
သူငယ်ချင်းတို့ ၀ ဆိုတာ အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်….မြန်မာပြည်အတွက် အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ လူမျိုးပါ…..တရုတ်တွေ ကသူတို့ကိုလူမိုက်မွေးသလိုမွေးပြီးမြန်မာပြည်ကို အမည့်ခြွေမှာ
About ဒေါက်တာ ကွာစိ
ဒေါက်တာ ကွာစိ has written 1 post in this Website..
View all posts by ဒေါက်တာ ကွာစိ →
ဒီလို မတောက်တခေါက် လက်နက်လေးတွေ မတောက်တခေါက် စစ်တပ်အင်အားလေးရှိ
ရုံမျှဖြင့် အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သည့် စစ်သားများပါ ပါဝင်သည့် မြန်မာ့ စစ်တပ် မြန်မာ့စစ်အင်အားကို
ခင်းဗျားပြောတဲ့ သုည ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကို ဟိုးးး အရင်ကတော့ ကြားဖူးပါ၏…….
ဒေါက်တာနေကြာ ဆိုပါလား… လူသစ်ထင်တယ်ဗျို့…..
ဒေါက်တာ ကွာစိ … ဆိုဘာလား …
ကျိုစိုဘာဒယ် မိတ်ဆွေ …
အခု ဝ ဆိုပီး တင်ထားဒဲ့ ပုံဒွေ ကျိတွားဘာဒယ် …
ကျုပ် သိဒဲ့ ဝ ကတော့ တွက်ပီ ကာတွန်း ထဲက ဇာတ်ကောင်ဘဲ .. ဟီး ..
အလိုလေး … ကျနော်ဖြင့် အင်မတန် ကြောက်ရွံ့လေးစားသွားတယ်ဗျာ
ဒီလို “၀” စစ်တပ် ဒါတ်ပုံတွေကို ၀တွေဆီက မတွေ့ဖူးသေးဘူး …
ဆိုတော့ ဂျူတီကျတဲ့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို ကိုဘဲ အကူအညီတောင်းရတော့မယ်…
ကျနော် ၀စစ်တပ်ထဲ ၀င်ချင်လို့ ကူညီပေးပါအုံးဗျ
ခုလေးတင်ဘဲ ဆယ့်တစ်ဆိုးဒ်မှာ ကျုပ်မန်းခဲ့ပြီးဘီ စစ်ပွဲဆိုတာကိုတော့အလိုမရှိဘူး
ဒီနေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘယ်သဘုံမှ စစ်အစိုးရတိုက်လို့မနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျုပ်ကတော့မထင်ဘူး
စစ်တပ်အရေးပါကြောင်း လုပ်ပြနေတယ်လို့ နားမလည်ဘူးလား သဂျီးလီးဘဲကွာ
ဝ ဆိုတဲကောင်တွေ ကရင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေလောက် စစ်တိုက်တတ်တယ်လို့ထင်နေလို့လား
အဲ့သည်ငါလိုးမသားတရုပ်တွေကို စစ်တပ်က တိုက်တဲ့အခါ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားကူမယ်
အာမီရမ် ခွဲတမ်းချတဲ့နေရာမှာ ကြီးကြပ်ဘို့
သဂျီးလီးဘဲကွာလို့ ဆဲရဘူးလေ၊ ယိုင်းလှဂျီလား နာရိုးမဓါး အောင်ပုရဲ့…
ချိုင်းနားက.. သူနဲ့ထိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကို.. ယူအက်စ်လွှမ်းမိုးမှုအောက်အရောက်ခံမှာမဟုတ်ဖူး..
အဲဒီမှာ ပြထားတဲ့.. ၀စစ်သည် ၃သောင်းလောက်က.. ဘယ်တော့မှသတ်လို့မကုန်တဲ့.. ၃သောင်းပဲ..
နောက်မှာ မြန်မာ့လူဦးရေနဲ့ညီတဲ့.. ရက်ဒ်အာမီသန်း၆၀က..၀င်ဖြည့်မှာပဲ..
ပါးပါးမှ.. တကယ့်ပါးပါးလေး.. :buu:
ဝတပ်တွေက လက်နက်ကရိယာတွေနဲ့ အပီစစ်ရေးပြနေပေမယ့်
တရုပ်က ဝကို လက်နက်မရောင်းပါဘူးလို့
လက်ရှိမှာ သဘုံနဲ့အစိုးရ မှာ ဘယ်ဟာကိုသူရွေးမယ်ဆိုတာ
အထူးသဖြင့် ရခိုင်ကမ်းခြေကနေ တရုပ်ပြည်ထိသွားမဲ့ ပိုက်လိုင်းကြီးတွက်
သဘုံတွေထက် အစိုးရက အရေးပါတဲ့သဘောစိဘာဒယ်သဂျီးမင်း
သဘုံပေါ်ပျူလေးရှင်းဆိုတာက သူဘုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရပ်ကွက်လုံး
သူတောင်းစားမှသည် ဖွားသီလတွေထိ မန်းပါဝါထဲထည့်တွက်ထားတဲ့
ဖွားသီလတွေ ပါ ထဲ့တွက်ထားပြီး
စစ်ဖြစ်လာရင် အဲ့သည်သူတွေကို ပျီသူတွေ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေလို့
ပြောပြီး ဟယူမန်ဒိုင်း ( ဘိုလိုရေးခြင်တာ မတတ်လို့ ) လုပ်ကြတာကို
ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ ဘကြီး အက်ဖ်အာ ရဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်ဆိုတာကိုလည်း
ပိုက်လိုင်းကို.. လက်ခံထားတာဟာ.. ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်.. ချိုင်းနားကိုလိုက်လျှောထားသလိုလိုနဲ့.. တချိန်မှာ.. အဲဒါကချိုင်းနားစီးပွားရေးရဲ့.. အသက်သွေးကြောတခုဖြစ်လာရင်.. (ဖြစ်လာဖို့လည်း.. တော်တော်များပါတယ်..) ချိုင်းနားစီးပွားရေးနဲ့..တည်ငြိမ်မှုကို.. လည်ပင်းကထိုင်ညှစ်ယုံပဲလို့.. နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..
အဲဒီအချိန်မှာ. “၀”ဆိုတာ.. ပိန်သွားမှာပါ…။
ဒီဂိမ်းဟာ.. ပါးပါးမှ.. တကယ့်ပါးပါးလေး.. :harr:
သဂျီးမင်းခညာ…… အရမ်းကိုပါးလွန်းနေတာ ပြသနာရှိပါတယ်ခည..
မပြောတတ်မနေနဲ့ ကိုပေါက် အရင်တစ်ခါ ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်တာ အဲဒိကောင်နေနဲ့ပေါင်းပြီး ဟိုမဟုတ်တစ်ရုပ်ကောင်တွေ မန္တလေး အပိုင်စီးလိုက်တာ မေ့သွားပြီမဟုတ်လား
အေးဗျာ…သူကြီးကို..တဲ့တိုးကြီး..ဆော်ကြနဲ့လေ။ ပြောချင်ရင် အင်တာနက် ဘန်းစကားလေးနဲ့ ကဗျာဆန်ဆန် ပြောကြမှပေါ့ကွယ်ရို့။ ဥပမာဗျာ -သူကြီးကို `အောင်ဝေး`ပဲဗျာဆို တော်သေးတယ်။
ကဲ..အဲဒီတော့..ဘာ ညာ သာဒကါ
သူတို့ရဲ့ စစ်ဗျုဟာတခုရှိတယ်လေ လူလှိုင်းစစ်ဆင်ရေးလို့ ပြောတာပဲ။ လူအားနဲ့ ဖိထိုးတာ၊ ထိုင်ပြီးပစ်နေတဲ့သူတောင် မပစ်နိုင် လောက်အောင် အလုံးအရင်းနဲ့ ပြေးတက်တာ သေလဲသေပဲ နောက်မှာ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုး။ တော်တော်များများက မန်းလေးရောက်နေပါပြီဗျာ။
ကွန်မန့် အရေအတွက်မပြတဲ့  မန့်သူ တွေ တွေ့နေရတယ်
ရွာသူားမဟုတ်တဲ့.. အပြင်လူတွေကို.. မန်းခွင့်ပေးထားပါတယ်..
အလွဲသုံးစားသိပ်လုပ်ကြရင်တော့.. ပြန်ပိတ်မယ်…. လို့.. ။ :buu:
သဂျီး… မောင်ကျောက်တို့လို လူလုံးလည်းပြ ရင်တွင်းဖြစ်အမှန်အကန်ရေးတဲ့သူတွေအတွက် စဉ်းစားသင့်တယ်… လက်သီးပုန်း ထိုးမယ့်သူတွေကို လွှတ်ပေးတာ ဘဝင်မကျဘူးဗျာ။ ကိုယ့်စကားကိုယ်တာဝန်မယူတတ်သူတွေနဲ့ တစ်တန်းထဲထားရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ သဂျီးက Server ပိုင်တဲ့သူ Brainstorm လုပ်ပြီး အိုင်ဒီယာလိုချင်မှန်းသိပါတယ်… ဒါပေမယ့် အလကားမဲတင်း၊ တရားဝင်ရွာသားတွေကို အတန်းမချပါနဲ့ဗျာ… ဆန်ဒပြတယ်ဗျို့
ဟေ့ကောင် ကျောက်ခဲ…တဂျီးက လစ်ဘရယ်မဟုတ်ဘူး၊ ဗျူရိုကရက်ကွ…
GhI GhI the GuY says:
ဒဂယ်တော့ သဂျီးဆိုတာ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်မဟုတ် မလစ်တရီ ဂျွန်ဒါ.
ဘကျောက်ခွဲခဲ့တဲ့…ခေါင်းတွေကမနဲဘူးတဲ့…သိတဲ့အတိုကြီးတွေ ကပြောတာပါ။ သတိတော့ထားကြနော…
(သွားတွင်ကပ်သောသွားဂျီးကို ပြောခြင်းသက်သက်ပါ….သူကြီးအားရွဲ့စောင်းပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။..ပြောလည်းမပြောဝံ့ပါခင်ညား) :om:
သယ်… ကန်ဘောဇထဲက အကောင်ကြီးကြီး ငမိုက်သား garuda
နင်နဲ့ငါ ကြိုးချည်ပြီးပြိုင်ဆွဲမလား… နင့်ကိုယ်မှာ ကြိုက်တဲ့နေရာ ချည်၊ နာ့ဘက်ကတော့ ဓာတ်တိုင်မှာချည်ထားတယ်။ ဗလ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရုန်းစန်း ငါ့ကောင်ကြီး
အမ်…ပေါက်တီးပေါက်ရှာ…ဘယ်နေရာကြိုးချည်ပီးပြိုင်ဆွဲမှာတုန်းဂျ…အဲဒါ ကလေးကလား တုန်းကလုပ်တဲ့
အလုပ်တွေ…ပါဗျာ။ ဒါနဲ့ အောက်ပြည်အော်ရွာ…စိတ်ဝင်စားရင် ရန်ကုန်toyshop ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကိုသွားကြည့် ဦးကျောက်ခဲ အတွက်သီးသန့်တွေရှိတယ် :harr: ။ ဒါနဲ့နေပါအုံး…ကျွန်တော်မျိုး သျှမ်းပြည်မှာလည်း မနေဘူး…ရန်ကုန်မှာလည်း..အဲသည် အရပ်မှာ နေဘူးပါဘူးဗျာ။…အီးမဲဆက်သွယ်ချင် ရင်ပြောနော်…ကျုပ်မှာ..အီးမဲ…အမျိုးမျိုး၁၅တုံး လောက်ရှိတယ်။ အမျိုးသမီးနံမယ်နဲ့ ၅မျိုးရှိတယ်။ ကြိုက်တာယူပါ ၂ကျပ်ခွဲ။ ဦးကျောက်ခဲ ဖွဗွက် အကောက် ၄မျိုး ရှိသလိုပေါ့ဗျာ
အေဘေးကြီး နီဟာလေ မုံလာဥလုပ်ချင်တုံး နိလေသံကြည့်ရင် သိဒယ် … ကန်ဘာရာကိုလာခဲ့မယ်… ဟဲ ဟဲ
လေသိပ်မပေါနဲ့ ကိုကိုခဲ…မြို့တွေလည်း..တစ်မြို့ပြီးတစ်မြီု့ပြောတာကုန်တော့မယ်… စစ်ဋ္ဌာနီ၊ ပါ့သ်၊ ဒါဝင် နဲ့ တက်စ်မေးနီးယားပဲကျန်တော့မယ်။ ၀ါးဟားဟား…နောက်ဆုံး နယူးဇီလန်ပေါ့ဂျာ။ ဖမ်းနိုင်ရင် ၅၀၀ နော် ဘယ်သူလဲဆိုတာ..မိအောင်ဖမ်း။ ဒီလကုန် အထိအချိန်ပေးထားမယ်။ မဖမ်းနိုင်ရင်တော့…ကိုကိုခဲ…ညလေးကို လောင်းဂျေးပေးရမယ်နော်….
ဘာဂျ?!! အပိုဆုပါတယ်?? ဟားဟား…ဒီမှာ ဒါဒွေဂရုစိုက်ဘူးဂျ..ပိုဒေါင်ကောင်းသေး ညညအိပ်ရေးပျက်ရတဲ့ မွေးကင်းစ ခလေးအဖေ ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဂျာ :harr: :harr:
အဲ…အဘရေ..လွယ်လွယ်လေး ဆိုတာကတော့…သူကြီးရဲ့ အနေအထား..နောက်ပီး…ယူအက်စ် အေက မြန်မာ အိုင်တီ ပညာရှင်တွေရဲ့ အနေအထား..(အထူးသဖြင့် နက်ဝေါ့အင်ဂျီနီယာ ဆီကျုရတီ စပတ်ရှယ်လစ် တွေ စသည်ရဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ရင်း အဲဒီဆရာကြီးများကလည်း သူကြီးကို အများကြီးကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ ယူဆထားတယ်လေ။ အဲဒီဒေါ့..ဥမပါ..အားဖြင့် လုံးတုံးတုံးနဲ့ ဟောင်ကောင်ကြီး ဦးကျောက်လုံးက(နာမည်ဆင်လျင်ခွင့်လွှတ်ပါ) သူနေတဲ့ ဘယ်မြို့ကဘဲ မန့်မန့်…ဒါဘယ်သူလဲဆိုတာ..အကြမ်းဖြင်းခန့်မှန်းလို့ ရပြီလေ။ အဲဒီကတစ်ဆင့်..တဖြည်းဖြည်း
နယ်မြေကျဉ်းချသွားရုံပဲ။ အဘရယ်…အရိုးရှင်းဆုံး..ဥမပါကတော့..ဓာတ်ယှည်ဒဲမှာ….လူဆိုးကဖုန်းဆက်ရင်…စီအိုင်အေတို့ဘာတို့က လူဆိုးကို လိုက်သလိုပေါ့..အချိန်ကြာကြာပြောလေ..လူဆိုးရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်နိုင်လေလေ။ အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဆိုတာ ဖအေတူမအေကွဲတွေလေ အတူတူပါပဲ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နယ်မြေကျဉ်းသွားအောင်ရှာရင်းလည်းလိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ပညာပေါ့ဂျာ။ ရဲဘက်ဆိုင်ရာ အိုင်တီ သမားတွေပိုသိတာပေါ့။ ငွေကြေးလည်းလိုတာပေါ့ဗျာ။ စက်ကောင်းကောင်း ပညာရှင်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရင် မိတာပါပဲ။ တဖက်ကလည်း…အဘပြောတဲ့ အိုင်ပီအက်ဒရက်စ်ကို ပြောင်းနိုင်တဲ့ အပျော့ scabies တွေလည်းသုံးတယ်လေ…ဆိုတော့…..။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမေဂျိကန် အစိုးရကလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့….လွတ်သွားခဲပါတယ်။ ၀ိုင်ဖိုင်တွေ…ဂြိုလ်တုတွေကသုံးလည်းမလွတ် နိုင်ပါဘူး။ အဘရေ…အင်တာနက်ဆိုတာ လူတွေက လွတ်လပ်တဲ့နေရာလို့ ထင်နေကြတာ…တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူး။ အဘဟာအဘ….ဘာနဲ့ဘဲကာကွယ် ကာကွယ်..ဘယ်လောက်ပဲ နေရာတွေပြောင်းပြောင်း…အစိုးရ လက်ထဲကတော့ မလွတ်နိုင်ပါဘူး အဘလုပ်သမျှအကုန်လုံးသူတို့ သိနိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့…နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုမျိုး..အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တာမျိုး….လူကုန်ကူးတာမျိုး..လက်နက်ကုန်ကူးတာမျိုး..ကလေးသူငယ် လိင်မှုဆိုင်ရာ.စသည်တွေနဲ့ပတ်သက် နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့လိုက်ခဲပါတယ်။ အကယ်၍ ဗမာပြည်မှာ ဆိုရင်အခုအချိန်မှာ..အစိုးရက..တော်တော်များများကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ သူတို့မှာ အဲဒီလို လိုက်နိုင်ဖို့အတွက် သီးသန့်ဋ္ဌာနတစ်ခု ရှိကိုရှိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မရှိဘူးဆိုရင်တော့…အတော်တုံးလို့ဘဲ
မယုံမရှိနဲ့ အဘအိမ်က အင်တာနက်ကနေ တာလီဘန်တို့ ဂျီဟဒ်တို့ ဘင်လာဒင်တို့ ဂူဂဲလ်မှာ ရိုက်ရှာတာနဲ့ အဘဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သူတို့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုအောက်မှာရောက်သွားပြီ အဘကနေ့တိုင်း အဲဒီဝက်ဆိုဒ်တွေကြည့်လေ သူတို့က အဘကိုအာရုံစိုက်လေပဲ။ သိပ်အချိန်ကြာလာလေ…အဘအတွက် အန္တရာယ်ကြီးလေပဲ။ အဲဒီကြားထဲ..အဘနေတဲ့ အရပ်က အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်တွေပေါလို့…အဘ အင်တာနက်လိုင်းကို ဟက် လုပ်ပြီး ကောင်းကောင်း အသုံးချသွားလို့ကတော့ ခုရှုပ်မှနောက်ရှင်း အဘကတော့ အဲဒီကိစ္စလက်သည် အစစ်မပေါ်မချင်း အထဲမှာသွားနေရမှာပဲ။ ပျင်းရင် မိကျောက်အဖော်ခေါ်သွား :)…. အင်း…..အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ တကယ်က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက လိုက်နာရမှာ အများကြီးပါ။ လမ်းစည်းကမ်းလိုပါပဲ။ ဥပမာ…သူကြီးက သူ့ဆိုဒ်ကို စီမံခန့်ခွဲ…ကြည့်ရှုဖို့…လူတစ်ချို့ကို ဌားထားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီလူတွေဟာ..ဒီဆိုဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရာရာမှာ နှုတ်လုံဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ…မန်ဘာများရဲ့ အကြောင်းအရာ..နာမည်..လိပ်စာ..စသည်ကို လုံခြုံစွာထားပါမယ်..အိုင်ပီး အက်ဒရက်စ်က အစပေါ့။ ဒါ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းများပါပဲ။ အဲ…ရဲတို့ထောက်လှမ်းရေးတို့ ဒုစရိုက်မှုတို့နဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ လိုအပ်သလို ထုတ်ဖော် အသုံးပြုခွင့်ရှိပေမဲ့….တစ်စုံတစ်ယောက်ကလိုချင်လို့…မိမိ ဆွေမျိုးသားချင်း..မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကသိချင်လို့…ဆိုရင်ထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ကိုကိုယ်တိုင်လည်း မထုတ်ဖော်ရပါဘူး…ဥပမာ…သူကြီးကိုဆဲလို့ ဆိုပြီးသူကြီးက လိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး…ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ပါတယ်ထင်တယ်။ အဲ…သူကြီးကို သတ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်လာရင်တော့ ဒါမှမဟုတ် မဟုတ်တမ်းတရား..ဆူပူအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းမျိုးရေးလာရင်တော့..တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်ရှိမယ်ထင်ရင် ရဲကိုအကြောင်းကြားပြီး လိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်….အေးဂျာ…အဲ..အဲ..ဒါလေး…ကျွန်တော် သိထားသလောက်လေး မှားရင်မှားမယ်နော်…ချင့်ယုံပါဗျာ…ဦးကြောက်ဂဲ အညဝေဒယ် ကျီတူတွေ ကြမ်းဂျားညပ်ပါစေဂျာ။ :harr:
နင့်သဂျီးက လာသမျှအားလုံး ဖွင့်ပေးပြီး ကျုပ်ရွာသားတွေဆို အလကားပါဗျာ လုပ်နေလို့ တင်းတာကွ… ဘယ့်နှယ် အီးမဲအမှန်တောင် ပြစရာမလို၊ ငါ ပေါက်ကရနဲ့ရေးတာ ဒါ သုံးကြိမ်မြောက်…
ကိုကိုခဲရေ..ခင်ဗျားကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုရင်ရေးသာရေး..ကိစ္စမရှိ..သူကြီးက သူ့လူမဟုတ်လို့ကတော့..ခင်ဗျားကိုဖမ်းချင်ရင် အလွယ်လေး။ သူကြီးက တိတ်နေလို့ အိပ်နေတယ်လို့တော့ မထင်နဲ့…သူက..ဆည်ဝကစောင့်…နေတဲ့ဗျိုင်းဗျ…။ ခင်ဗျားက…မန်ဘာဖြစ်ပြီး…အပြင်လူလို ဟန်ဆောင်ရေးနေလည်း သူကသိတယ်လေ။ဟဲဟဲ…လည်လို့ သူကြီးလုပ်နေတာပေါ့ကွယ်။
” သူကြီးက ဖမ်းချင်ရင် အလွယ်လေး ”
ဖမ်းဖို့ မလွယ်လောက်ဘူး ထင်တယ် ။
မြန်မာပြည်မှာက အင်တာနက်ဆိုင် ပြောင်းလိုက်တာနှင့် ၊
IP Address, Computer, Browser အကုန်ပြောင်းသွားမှာ ။
e-mail address ကလဲ ကြားဖူး မြင်ဘူးတဲ့ ၊
( တကယ်ရှိတဲ့ ) e-mail address တစ်ခုခု ရိုက်လိုက်ရုံပဲ ။
ကဲ ၊ ဘယ်လို လိုက်မလဲ ။
မယ်စကြာဝဠာ miss International universal မယ်ဝဠာ ခင်ပိန်ရိုး says:
မယ်ဝဠာ ခင်ပိန်ရိုး ကတော့ ၀ ဆိုတာ မြင်ရင် သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ.. ဘာလဲလို့ ၀င်ကြည့်တာ.. ၀ အစစ်တွေပဲနော်.. ၀ တွေ ၀ တွေ.. အဟိ
အဲ့ဒီ ဝ ဆိုဒဲ့ကောင်ဒွေကို
သီဟတင်စိုးတို့ နေထက်လင်းတို့ကို သွားတိုက်ခိုင်းရင်ကို ကိစ္စပြတ်တယ် ဘောပေါက် ဟွင်းဟွင်း
မဝင်ဖြစ်တာကြာလို့ ဝင်ကျိဒါ :harr:
ဒေါက်တာ ကွာစိ says:
သူငယ်ချင်း ဘုအဲ ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိသင့်တယ်ထင်လို့ ဒီ ပုံတွေကိုတင်ပေးတာပါ…တစ်ခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး….ကျွန်တော်ဟာ ၀ ဘက်တော်သားမဟုတ်ပါ…
အိုး အိုး ဟော့ တယ် မင်းလေးက ဟော့တယ်
မံမာပီ၊ ရှမ်းပီ၊ မန်းလေး၊ ရံကုံ၊ နောက်ဘာဖစ်မယ်မတိတေးဝူး
ခုတော့ရွာထဲ ဧည့်သယ်တွေ (ကျူးကျော်သူတွေ) အလုံးအပြားနဲ့ အဲမှားလို့ အလုံးအရင်းနဲ့ကို
တပြုံတခေါင်းဂျီး ၀င်ချလာတာ…. ပါးပါးလေးပဲလား ခညာ…